Tu Maung Nyo – “လေးစားလိုက်နာ”လို့ ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
Tu Maung Nyo – “လေးစားလိုက်နာ”လို့ ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ
“လေးစားလိုက်နာ” လို့ ပြင်မပေးရင် လွှတ်တော်ထဲ မဝင်သေးဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အတည်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
“ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလုံး၊ စကားစုလေး” ကို ကပ်နေတယ်၊ ရမယ်ရှာနေတယ် တဲ့။
“ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလေး၊စကားစုလေး” ကို ဘာကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူ ၊ ကြည်ကြည်သာသာ၊ ပြင်မပေးချင်ရတာလဲ/ ဘာကြောင့်ပြင်မပေးနိုင်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို
ပုဒ်မ။ ၆ (စ) “နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး “ဦးဆောင်မှု” အခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို အစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည်”
အထက်ပါစာပိုဒ်ထဲက “ဦးဆောင်မှု” ဆိုတဲ့စကားလုံး က ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလုံးလား။အဲဒီစကားလုံးပြင်ပေးပါလို့ တောင်းဆို လာရင် အဆိုပြုလာရင် ဘာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးပဲ ဆိုပြီးအလွယ်တကူပြင်ပေးနိုင်ပ့ါမလား။
“နိုင်ငံရေးအရေးအကျဉ်းသား”၊“ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံနေရသူ” ဆိုတာတွေကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက လက်မခံတာ ဟာ ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလုံး၊ စကားစုတွေမို့လား။
မတူတာတွေဆိုပြီး ဘေးဖယ်ထားရ မှာလား။
“စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်” ဆိုတဲ့စကားရပ်ထဲက “စည်းကမ်းပြည့်ဝသော” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့စကားရပ်က ဘာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးကို ကပ်သီးကပ်သပ်
ဥပဒေဆိုတာကို လူတွေကစကားလုံးတွေစကားစုတွေကို သဒ္ဒါသတ်ပုံနည်းကျစွာနဲ့ရေးသားထားတာပဲ။လူတွေရေးထားတာကို လူတွေကပြင်ပေးဖို့ ဖြည့်စွက်ဖို့ တောင်းဆိုတာဟာ ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်တယ်ဆိုတာ စကားလုံးကို မသုံးဘဲ၊ အမူ အယာနဲ့ငြင်းခုန်ကြရမှာလား။
ကျနော်မြင်တာတော့ စကားလုံး၊ စကားစုတွေထက် ပိုအရေးကြီးတာက ပြင်ဆင်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ သဘောထားရှိ/မရှိ ဆိုတဲ့ အချက်က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
အဓိကတော့ Political will ရှိ/မရှိ ဆိုတဲ့အချက်က အခရာကျပါ။ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံး အဖြတ်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်+ အမျိုးသားလွှတ်တော်) ထဲမှာ အများစုဖြစ်တဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ (USDP) က လွှတ်တော်အမတ်များနဲ့
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ (၁၆၆)ဦးသော စစ်သားအမတ်တွေ အပေါ်မှာ မူတည် နေပါတယ်။ သူတို့တတွေမှာ ပြင်ဆင်ပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့သဘောထားမရှိရင် ပြင်ဆင်ပေးရေးတောင်းဆိုချက် လက်တွေ့ ဖြစ်မလာ နိုင်ပါဘူး။
ဒေါက်တာအေးမောင်(RNDP-ပါတီဥက္ကဋ္ဌ)ကဲ့သို့ “ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကျနော်တို့ လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်” ဆိုတဲ့ ဆန္ဒသဘော ထားမှန်သူတွေ လွှတ်တော်ထဲမှာ အများစုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ရေးဟာလက်တွေ့ဖြစ်မြောက်လာနိုင်ပြီး၊ ဦးသန်းမောင် (ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်) ကဲ့သို့ “ဘာမဟုတ်တဲ့ အငြင်းပွားမှု” လို့ ကြည့်မြင်ပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားရှိသူတွေသာ အများစုဖြစ်နေရင်တော့ ပြင်ဆင်ရေးဟာ လက်တွေ့ဖြစ်မြောက်မလာနိုင်ပါဘူး။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး (NLD)ပါတီကို ဝန်းရံကြမယ်ဆိုတဲ့ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) လွှတ်တော်ပြင်ပအင်အားစုတွေရဲ့အသံသိပ် မကြားရတာလည်း ထူးခြားတယ်။
ယခုကိစ္စသည် စကားလုံးသက်သက်ကို အငြင်းပွားနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီစကားလုံးကဖေါ်ပြနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ပြော နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလဟောပြောချက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ့ ထိပ်တန်းတာဝန် ၃ ရပ် (တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး )နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင်ဆက်နွှယ် ပတ်သတ်နေ တဲ့ကိစ္စ လည်းဖြစ် ပါတယ်။ အခုနောက်ထပ်ခြေလှမ်းကတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ထံ (NLD) ပါတီ က စာရေးတင်ပြမယ်လို့ဆိုပါ တယ်။
ဖြစ်စဉ်တွေကိုအခုလိုစီပြီး ကြည့်တော့ –
၁၁ ဧပြီမှာ (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ၊ နေပြည်တော်သွားပါတယ်။ သမ္မတနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ပါတယ်။
သတိပြုမိတဲ့အချက်က ပထမတစ်ကြိမ်(၁၉ သြဂုတ်၂၀၁၁) တွေ့ဆုံစဉ်ကလို ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ သမ္မတ တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဓါတ်ပုံနဲ့သတင်း လည်း အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဖေါ်ပြတာမတွေ့မိပါဘူး။
၁၄ ဧပြီမှာ (NLD) ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်း နေပြည်တော်သွားပြီး သမ္မတ ထံ “အကြံပြုစာ ” တင်ပါတယ်။
၁၉ ဧပြီမှာ နေပြည်တော်ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးက ဖိတ်လို့ဆိုပြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း နေပြည်တော်သွားပါတယ်။ နေပြည်တော်ခုံရုံးက လက်ချာ ရိုက်လွှတ်လိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။
၂၃ ဧပြီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးဉာဏ်ဝင်း အခုလိုရင်ဖွင့်ပါတယ်။
“ — သဘောမတူတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သဘောမတူတဲ့အချက်တွေကို ပြောပါလားဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က အမှုတစ်ခု ကြားနာနေတာမဟုတ်ဘူး။ အမှုတစ်ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ရှေ့နေပါ။ လျှောက်လဲချက်ကို ဆယ်ခါမက ပေးနိုင်တယ်။ ပေးတတ်တယ်”
ဖြစ်စဉ်အပေါ် အကြမ်းဖျင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင် သမ္မတထံအကြံပြုစာတင်တယ်။ သမ္မတ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက် ပေါ်လွင်ပါ တယ်။
သမ္မတက “လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်”ပေးနိုင်တဲ့သမ္မတမဟုတ်ဘူး။ “လွှတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်” လောက်သာပေးနိုင်တဲ့ သမ္မတဖြစ် ပါတယ်။ အခုကိစ္စက ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခုံရုံးနဲ့
ခုံရုံးကခေါ်လို့သွားရတယ်၊ ခုံရုံးက“ရှင်းပြ”(လက်ချာပေး) တာတွေနားထောင်ခဲ့တယ်။ ရှင်းပြချက်တွေထဲမှာ သဘောမတူတာ တွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ထံ (NLD) ပါတီက စာရေးတင်ပြတာဖြစ် ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးက ခေါ်ပြီး ရှင်းပြသလို “ရှင်းပြ” (လက်ချာထပ်ပေး) နေရင် (NLD)ပါတီ ဘာဆက်လုပ်မလဲ။
43 Responses to Tu Maung Nyo – “လေးစားလိုက်နာ”လို့ ပြင်မပေးရင် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ
pn wara on April 21, 2012 at 1:57 pm
ဟုတ်တယ် တူမောင်ညို- ခင်ဗျားထောက်ပြတာမှန်တယ်။ အစကထဲက ပြင်ဘို့ ခက်ခဲအောင်လုပ်ထားတာ။
NLD ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး လွှတ်တော်ရောက်အောင် လုပ်တာ ဆန်ရှင် ရုပ်သိမ်းရေး ပေါ်လစီ ကို အကောင်အထည်ဖေါ်တာလို့ မြင်တယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ မကြာခင်မြင်တွေ့ ရပါတော့မယ်။
အောင်မောင်း on April 22, 2012 at 11:55 am
စစ်တု၇င်ပြိုင်ပွဲကြီးကခုမှစတာပါ။ ပွဲမပြီးခင်ဗမာတွေမမြင်သေးတာကောင်းပါတယ်။ အမေ၇ိကန်၊
အီးယူ နဲ့ ဗြိတိန် ကတော့ဘယ်သူအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတာသိနေသလိုပါပဲ။
hlatun on April 21, 2012 at 5:31 pm
အခြေခံဥပဒေက စစ်တပ်ကဆွဲထားတာဆိုတော့ ဦးသန်းရွှေအတွက် တိုင်းပြီးချုပ်ထားတဲ့ အင်ကျီ ဦးသိန်းစိန် ၀တ်ရသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းဘူး။ နိုင်ငံတကာအမြင်လှစေဘို့
ပြင်သင့်တာပြင်ကြပါစို့။ အခြေခံဥပဒေက စာသားမသုံးပဲ တရားရုံးက ကျမ်းထုပ်ကိုင်ပြီး လွတ်တော်အားလုံးပြန်ကျမ်းကျိန်ကြည့်ပါ။ ။ ကျမ်းစူးမဲ့သူတွေ အများကြီး လွတ်တော်တောင် မိုးကျိုးပစ်ခံရချင်ခံရမှာ၊ ဘုရားရှင်က တရားတော်ကို လေးစားလိုက်နာသူကိုတရားတော်က ပြန်စောင့်ရှောက်မည်ဟောပါသည်။ ငါ့တရားတော်ကိုကာကွယ်ကြ မဟောခဲ့ပါ။ဦးသန်းရွှေကို ကာကွယ်ကြသဘောဖြစ်နေသလား။
metain on April 21, 2012 at 8:05 pm
tomawak on April 21, 2012 at 8:14 pm
We all know what is the regime’s real desire. They will not give up easily.
Their desire is just want to free from those sanctions, not to change for the best of the country of Burma.
They had been seized the power for decades.They oppressed and failed to do anything good.They still trying to grip the power for so many ways.
The funny thing is people like thant myint oo, u myint who are advisers to puppet president thein sein. They know what exactly all of these ex-military people are made of. I can’t understand why these PhD guys are working under non-educated regimes?
This is just beginning, we will see more mess later.
Maung Win on April 22, 2012 at 11:28 am
It is apparent that these guys are not fit in the human society. They themselves are also happy to work with animal society. Let it be, let it be.
ိdawei on April 21, 2012 at 9:13 pm
ပြည်သူ တစ်ယောက်နေနဲ့ ထင်မြင်တာကတော့
အစ အမှား တာကို မပြင်နိင်ဘူးဆိုရင် နောက်ဘယ်လို သေချာပါမလဲ။
NLD က ပြည်သူ့အတွက် လုပ်လုပ်ဖို့ လွှတ်တော် ကို လာတာပါ
ဇိမ်ခံ ဖို့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သေချာနေပြီ၊၊ဒီကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်ပြီး
လွှတ်တော် ထဲမှာ ပညာမတတ် တဲ့ သူ တွေ ဘယ်လောက် များနေတယ် ဆိုတာ ယုံကြည်ပါရစေ၊၊
သူတို့ တွေ က ကျွန်တော် တို့ လူထု အတွက် အလုပ် မလုပ်ကြ ဘူး ၊၊
maburma ma on April 22, 2012 at 1:22 pm
hello dawei….what you say is true..
yawna on April 21, 2012 at 9:13 pm
yes, we will see soon .
မောင်ငြိမ်း on April 21, 2012 at 10:01 pm
NLD က ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်လို့ပြောပြီး လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ဖို့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပဲ။
အရေးကြီးတာက၊ နအဖ လို သူတို့လိုရင် “ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ” မလိုရင် “ ငမြ ” ခေါ်တာမျိုး
may on April 22, 2012 at 1:32 pm
NL on April 21, 2012 at 11:36 pm
ပြောင်းလဲနေပါသည်လို.ဆိုတဲ.မြန်မာပြည်ကြီးဟာ စိတ်ရင်းစေတနာမှန်စွာနဲ.ပြောင်းလဲနေသလားအတုအရောင်လားဆိုဒါကတော.ရုပ်လုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ.ပေါ်လာပြီ၊ ဆက်ပြီးဖိအားဝိုင်းပေးလိုက်ရင်တော.ဖြင်.လုံးလုံးကိုပေါ်သွားမှာဘဲ
စောကလိုတူး on April 22, 2012 at 8:20 am
သမတသဘောတစ်ခုတည်းနဲ့ ပြင်လို့ မရပါဘူး.ဒီမိုကရေစီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာပါ. လွှတ်တော်ထဲမှာတခြားပါတီတွေလည်းရှိနေတယ်.စကားလုံးမပြင်ရင်အခြေခံဥပဒေပြင်လို့ မရဘူးဆိုရင် တော့ လည်းမတက်နဲ့ ပေါ့ .ဘယ်စကားရပ်နဲ့ ဘဲကျမ်းကျိန်သည်ဖြစ်စေအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ခွင့် ရှိတယ် ဆိုရင်တော့တက်ကိုတက်ရမယ်ပေါ့.အခြေခံဥပဒေကိုအဖွဲ့ ချုပ်ပါတီတစ်ခုတည်းနဲ့ ပြင်လို့ ရတာလည်း မဟုတ်.
မောင်ပျာလောင် on April 22, 2012 at 4:11 am
ဆရာညို လို့ ဘဲခေါ်ပါရစေ (တူဆိုတဲ့ အဓိပ္ပယ်က၊ ထုတဲ့တူလည်းဖြစ်တယ်၊ စားတဲ့တူလည်း – တရုတ်တူ – ဂျပန်တူ – ကိုရီးယားတူ စသည်ဖြင့်ကွဲပြားနေတာကြောင့်ပါ)။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာညို ဟာခေသူမဟုတ်ပါလို့ ကျနောတို့ လှည်းတန်းဈေးရှေ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ၀ိုင်းကအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အိုင်ကျူတော်တော်မြင့်တယ်၊ တိကြတဲ့အမှတ်အသားတွေဖေါ်ထုပ်ရေးသားနိုင်တာကြောင့် ယခုလက်ရှိ သမတအကြံပေးတွေ၊ စစ်ဗိုလ်လူထွက် အမတ်လောင်းပြုတ်တွေ ထက် တော်တယ်ဆိုတာ ရာနှုံးပြည့်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲက လူတွေ ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆရာညိုရယ် – “လေးစားလိုက်နာ”လို့ ပြင်မပေးရင်ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ – ဆိုပြီးရပ်မထားပါနဲ့ ၊ အဖွဲ့ ချုပ်ဘာလုပ် သင့်သလည်း၊ သမတ ဘာလုပ်သင့်သလည်း ဆိုတာလည်း အကြံပေးဦးမှပေါ့။ လုပ်ထာ မလုပ်ထာသူတို့ သဘော၊ သူတို့ အလုပ်။ တလောက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဆိုပြီးရာထူးတိုးတော့၊ ကျနော်တို့ စကားဝိုင်းဆူပွက်လာတယ်။ ဘယ်အဆင့်ကို ဒုတိယ ဆိုပြီးသုံးတာလည်း စသည်ဖြင့်စကားများလာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြက်သားသယ် အဒေါ်ကြီး မယ်ဘု ၀င်ရှင်းမှ ရှင်းသွားတယ်၊ နောက်ကို ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (အ၀က်သား၊ အစိတ်သား၊ ငါးဆယ်သား၊ ၇၅ ကျပ်သား) ဆိုပြီး ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ ရေးရင်ပြီးတာဘဲ ပေါ့တဲ့။ အဲဒီ့လိုဘဲ ဆရာညိုရဲ့မှတ်ချက်တွေကလည်း (အ၀က်သား၊ အစိတ်သား၊ ငါးဆယ်သား၊ ၇၅ ကျပ်သား) မှန်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ခန့် မှန်းပေးပါ။ အဲဒီ့လိုမှ မဟုတ်ရင် – မနက်ဖြန် မိုးရွာရင်ရွာမယ်၊ မရွာရင်မရွာဘူး – ဆိုတဲ့ မိုးလေဝေသ ကြေညာချက်လိုတော့ ကျနော် တို့ လို လူဘိန်းတွေမျက်စေ့လယ်အောင်မလုပ်ပါနှင့် ခင်ဗျား။
အောင်မောင်း on April 22, 2012 at 11:45 am
ဘာဆက်လုပ်၇မလဲဟုတ်စ၊ လည်းတန်းကပျာလောင်ေ၇ သိချင်၇င် အောက်ဘက်မှာ မောင်ဝင်း၇ဲ့ 
zaw on April 22, 2012 at 4:25 am
စောပညာ on April 22, 2012 at 4:45 am
ကျနော့ အမြင်ပြောရရင် “အခြေခံဥပဒေ” ဆိုတာဟာ လူသားတွေက ဖန်တီးထားတာပါ ။ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတချို့ဟာ လူသားတွေ အတွက် အကျိုးမပြုဘူး အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင် ပြုပြင်သင့် ပြုပြင်နိုင်ရမှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့ မပြုပြင်ချင်ရတာလဲ၊ စဉ်းစားကြပါ။ ဘယ်သူမှ အသက် (၁၅၀)အထိ မနေကြရပါဘူး။ ဘဝဟာ တခဏလေးပါ၊ သင်္ခါရသဘောကို ဘယ်သူမှ မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ သန်းရွှေလည်း သေမှာဘဲ ၊ မင်းအောင်လှိုင်လည်း တစ်နေ့သေမှာဘဲ မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ကောင်းအောင် ရေးဘို့လိုသည်။ ဒါမှ နောင်သံသရာအတွက် စိတ်ချရမှာနော်….ဒယ်အိုးကတော့ ကိုယ့်ကို မျက်နှာလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
Maung Win on April 22, 2012 at 11:21 am
၇ပါတယ်။ အခြေခံဉပဒေမပြင်ချင်၇င်မသူတော်တွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့တပ်မတော်ကို ဖျက်သိမ်း
maburma ma on April 22, 2012 at 1:31 pm
သိထားပါ on April 23, 2012 at 12:01 am
ဒါပေမယ့် အဲဒီအစားနောက်တပ်မတော်တစ်ခုတော့ အ၇င်ဖွဲ့စည်းထား၇မယ်ထင်တယ်။
စစ်သားက ကျားခုံပေါ်က ကျား၇ုပ်လိုတော့ တွေ့က၇ ဒုတ်ချောင်းချိုးပီးထည့်လို့၇မှာမဟုတ်ဘူး။
Mon on April 24, 2012 at 5:57 pm
Saw Pyinya, yes, it can change, but they don’t want to….That’s the thing….
Maung Maung on April 22, 2012 at 10:25 am
မှန်တယ်၊သိပ်မှန်တယ် ( ပြင်လို့မရတာဘာမှမရှိပါ
Set Htun on April 22, 2012 at 10:37 am
Don’t worry, we will see elected NLD as member of parliament (MP) to play in certain space
(Mg Suu Sun).
Mg Suu Sun, one of the Myanmar realistic political predictors and present game came true what he said though most do not appreciate.
Ag Ng Ag on April 22, 2012 at 10:42 am
The Generals Think Everyone asaFighting Ball. So all of you Don’t get it and wait for Another 50 yrs???
Don’t ask what NLD will do because NLD did somethings in the past???, didn’t they??
All of politicians should suck Generals’s Ball very gently so Burma will be approche to the Democratic Country.
မွန်လူမျိုးတဦး on April 22, 2012 at 10:50 am
အခုလို အသေးစိတ်ကအစ ဂရုစိုက်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက်
Truth on April 22, 2012 at 11:05 am
း) ဆောင်းပါးရှင် ရေးတာတော်တော်ကောင်းတယ်.
ခဲ တစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင် ပစ်တယ်..
သမ္မတ ကိုလည်းမြှောက်ပေးသလို.. ပြည်ပ ကလူတွေ ၀ိုင်းညှော် ဖို့အတွက်လဲ နှပ်ကြောင်းပေးတယ်..
Maung Win on April 22, 2012 at 11:13 am
ကိုေ၇ာက်ပါ့မလားလုို့ စိုး၇ိမ်မိတယ်။ လုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်မယ်လို့ ၇ည်၇ွယ်ထား၇င်တော့အဲသည်စကား၇ပ်ကိုမေ့ထားစေလိုပါတယ်။ အခြေခံဉပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်ဖို့ မပြောနဲ့ လေးစားစ၇ာလည်းမလိုဘူး၊ အခြေခံဉပဒေကို
ေ၇းဆွဲခဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်က ပြည်သူတွေကို၇က်၇က်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာမေ့နေကြပြီလား၊ ၇ဲဘော်တို့ 
key on April 22, 2012 at 11:33 am
ဒါကတော့ ”လုံးဝ (၀)” ပြင်ဖို့မလိုတဲ့အ၇ာပါ။
မိဘက သားသမီးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်တယ်။
တစ်နှစ်သားကလေးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာင့်တယ်ဆိုပါစို့ -
သူ့ ကို တစ်နှစ်သာလေးဘ၀ကပဲဘာမှမပြောင်းလှဲ၇အောင် ထားလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး
ကျွှေးသင့်တာကျွှေးပြီးပြုစုစောင့်ေ၇ှာက်၇မယ် ။ အန္တ၇ယ် မဖြစ်စေဖို့ကကွယ်၇မယ် အမှားတွေ
မလုပ်မိအောင် ထိန်းသိမ်းပေး၇မယ် လမ်းကြောင်းပေး၇မယ် ။ ဒီသဘောပါ ။ ကျွှန်တော် တို့နိုင်ငံ
အနေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ပါ ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကတည်းက ထိန်းသိမ်း စောင့်ေ၇ှာင်လာတယ် ။
ဒီနိုင်ငံကြီးကို သူတို့လက်ထက်က အတိုင်းထား၇မယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး ဒီထက်ကောင်းအောင်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပီး စောင့်ေ၇ှာက်သွား၇ပါမယ် ။ ကျမ်းပြုသူက ဒီသဘောလို့ထင်ပါတယ် ဒါကိုဘယ်လိုတလွဲ
တွေးပီး အတင်းပြင်ခိုင်းနေလဲတော့ နားမလည်တော့ပါဘူး။
maburma ma on April 22, 2012 at 1:46 pm
hello mr..mrs. key…medication time…medication time….
La Minn on April 22, 2012 at 3:36 pm
စကားလုံးကို ပြင်ခြင်း.. မပြင်ခြင်းထက် နောက်ကွယ်က လွှတ်တော်၊ ကော်မရှင်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားမှန်နဲ့ ရပ်တည်မှုကို မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာသိအောင်တူးဆွမှုတစ်ခုပါ..
စကားလုံးအပေါ်မှာ ထိရှခံစားနေကြတာမဟုတ်ဘူးလို့.. . ယူဆပါတယ်။
အချိန်တန်ရင် အင်အယ်ဒီက လွှတ်တော်ကို တက်ကိုတက်မှာပါ.. ဒါက အခုချိန်မှ နောက်ဆုပ်လို့ရတဲ့ အရာမျိုးမှ မဟုတ်တာ.. ဒါကိုလည်း လွှတ်တော်၊ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် သိရှိနားလည်ပြီးသားပဲ.. ဒီအကြောင်းပြချက် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ သူတို့တွေ အချင်းချင်း သိကြပါတယ်။
အစိုးရိမ်လွန်နေတာက ပြည်သူတွေပါ။ ဒါကလည်း ဖြစ်သင့်တဲ့ အစိုးရိမ်လွန်မှုမျိုးပါ..
La Minn on April 22, 2012 at 3:10 pm
ပြင်စရာရှိတာ မပြင်ပေးလည်း လွှတ်တော်တက်စရာရှိတာ တက်မှာပေါ့.. အခု၂၃ရက် နေ့လွှတ်တော်က အရင်မပြီးပြတ်သေးတာတွေကို ပြင်ဖို့ ရက်ပိုင်းပဲ ကျင်းပတဲ့ဟာပဲ.. ဒေါ်စုတို့ကို အတင်းတက်ခိုင်းနေတာက သမ္မတကြီးရဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ်မှာ မျက်နှာပန်းလှဖို့လို့ထင်တယ်။
သူတို့က ပြင်မပေးရင် သမတနဲ့လွှတ်တော်ကြား..ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေလို့ ပြောနေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ နာယကတွေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲက အမတ်တွေရဲ့ အမြှီးအမောက်မတည့်မှု၊ သဘောထားရပ်တည်မှုနဲ့ အရည်အချင်းကို မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာကို အသိပေးပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။ တကယ့်အစစ်အမှန် ဒီမိုကရေစီကို ဖေါ်ဆောင်မယ့်လွှတ်တော်လား၊ တစ်ဦးတစ်ယောက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ့် လွှတ်တော်လား ဒီအချိန်မှာ တိတိပပ သိခွင့်ရပြီ။ ဒီအပေါ်မှာ ကြည့်ပြီး လုပ်စရာ၊ ပြင်ဆင်စရာတွေ.. မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာတွေ အပေါ်မှာ ပြောင်းလွဲပြင်ဆင်လို့ ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပါတီရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖြစ်အောင်တောင် အခြေခံဥပဒေထဲက အချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်အစား လေးစားလိုက်နာပါမည်လို့ ပြင်ပေးခဲပြီးပြီပဲ အခုမှ ဒါလေးကိုကန့်သတ်နေတယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်က ဘယ်လိုဆိုတာ ပြည်သူတွေ သိခွင့်ရသွားတာပေါ့.. နို့မို့ရင် ကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားပါ၊ ကျွန်တော်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖခင်လိုသဘောထားတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျွန်တော်တို့နဲ့မောင်နှမ အရင်းတွေလို သဘောထားပါတယ်။ သူ့ကို လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်ဖို့ကြိုဆိုပါတယ်… လို့ပြောခဲ့တာတွေက တကယ်လား၊ လူကြားကောင်းအောင် ပြောတာလားဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဒီစကားလုံး ပြင်ပြင်.. မပြင်..ပြင် အင်အယ်လ်ဒီကတော့ အချိန်တန်ရင် လွှတ်တော်ကို တက်စရာရှိ တက်မှာပဲလို့ထင်တယ်။
ThanPhaye on April 22, 2012 at 9:20 pm
ကျွန်တော်အမြင်တခုတည်းနဲ့ ပြောရင် ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အမေစုပါတီ(NLD) က (တစည)ပါတီကိုမဲအပြတ်သတ်နဲ့ အနိင်ရခဲ့ တယ်၊ဒါပေမဲ့ အမေစုပါတီ (NLD) က၁၉၉၃ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ အခါတရားမျှတမူ့ မရှိလို့ လွတ်တော်ကိုသပိတ်မှောက်ပြီးလွတ်တော်တည်းမ၀င်ခဲ့ ဘူး၊အဲဒီအချိန်ကလွတ်တော်ထဲဝင်ပြီးအခြေခံဥပဒေကိုဝိုင်းဝန်းရေးဆွဲခဲ့ မယ်ဆိုရင် ၂၅ရာခိုင်နုန်းစစ်သားတွေလွတ်တော်ထဲရောက်ဖို့ နေနေသာသာလွတ်တော်တံခါးဝကိုကပ်လို့ တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး၊သူတို့ ရေးချင်တိုင်ရေးလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး၊အခုကိုယ်ကိုတိုင်မ၀င်တော့ သူများလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခွင့် ပေးသလိုဖြစ်သွားပြီ၊အခုတခါလွတ်တော်ထဲမ၀င်ရင်သူတို့ ကိုဒုတိယအကြိမ်အခွင့် အရေးပေးသလိုထပ်ဖြစ်သွားပြီ၊ပြည်သူတွေလည်းနင်းပြားဘ၀ကဘယ်တောမှတက်တော့ မှာမဟုတ်ဘူး၊ပြည်သူတွေနင်းပြားဘ၀ကလွတ်အောင်အမေစု(NLD)ပါတီကိုအကုန်ပုံအောပြီမဲပေးခဲ့ ပြီးပြီ၊ပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန်ကြေပြီနော်၊ကျန်တာတွေကအမေစု(NLD)ပါတီရဲ့ တာဝန်ပဲနော်၊လွတ်တော်တံခါးဝရောက်ပြီမှနောက်ပြန်မလှည့် ပါနဲ့ ဗျာ၊သူတို့ ရဲ့ လှည့် ကွက်ထဲထပ်ပြီမ၀င်မိပါစေနဲ့ ၊ပြည်သူတွေရဲ့ နင်းပြားဘ၀ကိုစာနာနားလည်ပေးပါ၊အားကိုးပါတယ်အမေ။
Mon on April 24, 2012 at 5:46 pm
Very good, Than Pyae for saying what we wanted to say….Absolutely right…
key on April 23, 2012 at 12:38 am
မှန်လားဆိုတာ မသိပေမယ့် ထင်တာလေးတော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်..
ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံ၇ဲ့အသက်လိုမျိုးမ၇ာပါ။
လိုက်နာပဲလိုက်နာပါမယ်ဆိုတာ အစိုး၇အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဥပဒေပြုေ၇းအဖွဲ့ တွေမပြောနဲ့ 
သာမန်ပြည်သူတွေက ပြောမယ်ဆို၇င်တော့ တာဝန်မယ့်လွန်း၇ာကျပါတယ်။
အသက်တစ်ချောင်းကို ကာကွယ်ဖို့အစားအသောက်တွေလိုအပ်မယ် သန်စွမ်းဖို့ ထိုက်သင့်တဲ့လေ့ကျင့်
နိုင်ငံတော်၇ဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်တယ်ဆိုတာလည်း အသက်တစ်ချောင်း
လိုပဲတန်ဘိုးထား၇ပါမယ် ။ပြင်စ၇ာ၇ှိ၇င် အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အ၇ာတွေကိုပဲ ပြည့်စွက်ပြင်ဆင်၇မှာမျိုးပါ ။ဆေးတိုက်၇မှာ
မျိုး၇ှိသလို ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်၇မှာမျိုးလည်း ၇ှိမှာပါပဲ ။ဒါပေမယ့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်မယ်ဆိုတဲ့
တန်ဘိုးထားမှုကိုတော့ လျှော့ချဖို့က မသင့်တော်ပါဘူး။
နဂါးမင်းဆွေ on April 23, 2012 at 1:11 pm
လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေက နိုင်ငံတော်ရဲ့ အသက်လား..
ဥပမာ။ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာ သူတို့ရဲ့ အတိတ်ကလုပ်ရပ်တွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို မထိပါးနိုင်အောင် အတိအလင်း ရေးစွဲထားတယ်.. ဒါကြီးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာ.. တိုင်းပြည်အတွက်လား.. ဘယ်သူ့အတွက်လည်း..
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အရင်းအမြစ်က ဘယ်ကို ဦးတည်သလဲ..
တကယ့်နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအတွက်ဆိုရင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ယုံတက်မကဘူး.. ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဦးညွတ် ပူဇော်ပါမည်လို့တောင် ထပ်တိုးသင့်တယ်..
key on April 24, 2012 at 9:34 am
၁။ ကျမ်းကျိန်၇မယ့်စာပိုက်ထဲမှာ လက်၇ှိလို့ကော (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံလို့ကော ပါတာမတွေ့၇ပါဘူး။
ဒါဆို ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်က အကျုံးမ၀င်တော့ဘူးလို့ပြောလို့၇ပါတယ်။
၂။ ကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်တယ်ဆိုတာကိုပဲ တနည်းထပ်ပီးဥပမာပေးချင်ပါတယ်။
လွတ်တော်ဆိုတာ ဥပဒေပြုေ၇းလို့ ပြောကြတဲ့အတိုင်း လွတ်တော်ထဲကသူတွေက ဥပေဒေကိုပြင်ဆင်
ထိန်းသိမ်း၇ပါမယ်။ဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံဟာသူတို့အပိုင်လို့ပြော၇င်တောင်မမှားပါဘူး။ဒါဆို သူတို့ပိုင်တဲ့အ၇ာကို
ကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်၇မယ်ဆိုတာ လွန်တယ်လို့ပြောနိုင်လား ။ ဥပမာ ကျွှန်တော်ပိုင်တဲ့ ခြံထဲမှာ ကျွှန်တော်စိုက်
သင့်တာစိုက်မယ် ကျွှန်တော်သဘောကျသလိုပြင်ဆင်မယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ခြားတစ်ယောက်က ဟိုလိုမလုပ်နဲ့ ဒီဟာမစိုက်နဲ့ လာမပြောနဲ့ ။ ဒါဟာကျွှန်တော်ပိုင်တာဖြစ်လို့ ကျွှန်တော်ကာကွယ်စောင့်ေ၇ှာက်၇မယ့်တာဝန်ပဲ။
အဲလိုမကာကွယ်၇င် လာချင်တဲ့သူလာပီးလုပ်ချင်၇ာလုပ်သွားမှာပေါ့ ။ဖွဲ့စည်းပုံလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ လူတစ်ယောက်က ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာ သူ့အတွက် (သူ့အမှားအတွက်) ကာကွယ်လို့မ၇နိုင်လို့ ဒီအချက်ကတော့ ပြင်လိုက်ဆို၇င် လိုက်ပြင်ပေး၇မှာလား။အဲဒါဆို၇င်တော့ ၇ှိနေဖို့တောင်မလိုတော့ဘူး ကိုဖြစ်ချင်တာသာ ကိုယ်လုပ်ကြတော့ လျှင်သူစားလို့ပြော၇တော့မယ်ထင်တယ်။
၃။ နောက်တစ်ချက် ဒေါ်စုကို အမတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အစိုး၇က ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးကို လစ်လျှူ၇ှုပီး
အမတ်ဖြစ်အောင်ဆွဲတင်ပေးလိုက်၇တယ်။ဒါက လူတွေက သူတို့ဖြစ်ချင်တာမို့ ဘာမှမပြောတဲ့အပြင် ၀မ်းသာကြတယ်။မဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်းတောင်းဆိုကြတယ်။နောက်တစ်ခါ အားလုံးသဘောမကျတဲ့သူမျိုး တစ်ယောက်လောက် ဒေါ်စုလို့ပုံစံနဲ့ဝင်လာ၇င် ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားမိပုံတောင်မ၇ကြဘူး။
အဲအချိန်ကျမှ ဒါဟာ ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ညှိပါတယ်သွားပြော၇င် ဟိုက ဘာပြောမလဲ ။တစ်ဖက်ထဲသိပ်မတွေးပါနဲ့
ကန့်သတ်ချက်ဆို၇င်တော့ ကြိုက်တဲ့သူအတွက်ကော မကြိုက်တဲ့သူအတွက်ကော အတူတူပဲဖြစ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
နဂါးမင်းဆွေ on May 1, 2012 at 1:57 am
၁။ ကျမ်းကျိန်မှုမှာ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလို့ တိုက်ရိုက်မပါပေမယ့် ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်လို့ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ..။ အသားလွတ်ကြီး မိုးကြိုးပွတ်၊ ဘုရားစူး လုပ်တန်းကစားတာ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်နော..
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံက သူတို့ (လွှတ်တော်အမတ်)တွေအပိုင်ဆိုရင်.. အဲဒီအမတ်ဆိုတာတွေက မြန်မာပြည်တနံတလျား ဒေသအသီးသီးက ပြည်သူတွေက ကိုယ်စားပြုတင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေမို့ သူတို့အပိုင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ပြည်သူတွေ ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ဆီရောက်တယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူပိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြည်သူတွေအတွက် အထောက်အကူမဖြစ်ရင် အကျိုးမရှိတာတွေရှိရင် ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ အဆိုင်းမတွ ပြင်ကိုပြင်နိုင်ရမယ်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် စစ်စစ်တော့ ဖြစ်ဖို့လိုမယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ သူတို့(လွှတ်တော်အမတ်)ဆိုတဲ့ လူတွေက ပြည်သူက အမှန်အကန် တင်မြှောက်ထားတာမဟုတ်ပဲ၊ အာဏာရှင်က တင်မြှောက်ထားတာဖြစ်လို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသူတွေဟာလည်း အာဏာရှင်တစ်ဦးတည်းကို ကာကွယ်နေတာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုနဲ့ လားလားမျှမဆိုင်ပါ။ ခင်ဗျားပြောသလို လျှင်သူစားသွားတာ၊ ညစ်ရဲသူစားသွားတာ လို့လဲ ပြောနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
၃။ အဲဒီကန့်သတ်ချက်တွေက ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ကန့်သတ်ထားတာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှိရင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ ရတဲ့ အရာတွေပါ။ “အားလုံးသဘောမကျတဲ့သူမျိုး တစ်ယောက်လောက် ဒေါ်စုလို့ပုံစံနဲ့ဝင်လာ၇င် ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ”… ဆိုတာကတော့ ရယ်စရာကြီးပါ။ အားလုံးသဘောမကျမှတော့ ၀င်လာစရာ အကြောင်းကို မရှိပါဘူး။ ဒေါ်စုဝင်လာတာ အာဏာရှင်ကြီးရဲ့ မဟာကန့်သတ်ချက်များ ဖြေလျှော့ပေးလို့မဟုတ်ပါဘူး… အားလုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး.. တကမ္ဘာလုံးက သဘောကျ ထောက်ခံလို့ပါ… ဒိအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ key ရယ်..
ခင်မင်တဲ့စိတ်နဲ့ လက်အညောင်းခံ ပြန်ရေးပေးတာပါ။
တော်ပါပြီဗျာ ဘာပြောပြော ထပ်မရေးတော့ဘူး..
ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိတဲ့ key ကိုလေးစားပါတယ်.. သဘောထား တိုက်ဆိုင်တာ၊ မတိုက်ဆိုင်တာကတော့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ။
Nai Kyaw Sein on April 23, 2012 at 7:25 am
ကျုပ်တို.တောရွာမှာ အဖေလုပ်တဲ့သူက ကြက်ဝိုင်းကနေ အရက်မူးတိုင်းကွက်နဲ.ြ ပန်လာတော့ သားဖြစ်တဲ့သူကို( သား အဖေပြောတဲ့အတိုင်း လုပ် အဖေလုပ်တလို မလုပ်နဲ. ကြားလား)တဲ့ သားဖြစ်တဲ့သူက အဖေကသားကိုခဏ ခဏဆုံးမတယ် အဖေ့ကိုရော ဘယ်သူဆုံးမ မလဲ ပြောတော့ အဖေက ဟိတ် သား မင်းကိုငါမွေးခဲ့တာ စကားမရှည်နဲ. အော်ငေါက်တာ သားက အောင့်သက်သက်နဲ.လှည့်ထွက်သွားတယ်။ယခုလည်း ညောင်၂ပင်လား ဂွေး၂ပင်လားညီလာခံမှာ ယခင်ဖွတ်အကြီးအကဲရဲ.သဘောအတိုင်းရွေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ကိုဖွတ်ပါတီက မကာကွယ်ရင် ဘယ်သူ.ကိုကာကွယ်ခိုင်းအုံးမှာလဲ ပြည်သူတွေသဘောမကျတဲ့ ဥပဒေ စကားလုံးတွေကို ဘာလို.ပြောင်းလို.မရတာလဲ ၁၉၄၇ ကဥပဒေ၁၉၇၂မှာပြောင်း၁၉၇၂ဥပဒေ၂၀၀၈မှာပြောင်းနဲ.အမျိုးမျိုးပြောင်းနဲ.လုပ်ခဲ့ကြတယ် ယခုဥပဒေကို ကာကွယ်ဖို.ဆိုရင် တချက်ချင်း ပြည်သူကိုချပြ ပြည်သူတွေလက်ခံရင် ကာကွယ်ရတာ သဘာဝကျတယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဆောရီးဘဲ။
မုဒိတာ on April 23, 2012 at 10:10 am
အမေစု လုပ်၇ပ်ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါသည် ၊။။။။
Go * on April 23, 2012 at 6:08 pm
Agree that “safeguard” does not mean “can not repair”-like that family’s father safeguards house , but can repair unsuitable parts of house.
“Respect and follow” is more than that ; means to agree to do according to instructions.
Advise to ignore the dignity, go to Hlutaw unless there is any unknown/behind curtain reason. It is enough to show junta’s true skin to local and oversea , now.
NLD is not facing prophets of God , just facing opposite extremes.
Good politician does not need to be so stubborn or straight forward . Cleverness and flexibility is one of the qualities of good politician.
Your main target is what? Dignity or succeeding purposes? Don’t forget 2015 people gold cup!!!
Max zaw zaw on April 24, 2012 at 6:36 am
Mon on April 24, 2012 at 6:20 pm
Look!! Most of all of your saying are right. The thing is ‘TRUST’ which is the essential thing of everything we do, isn’t it??? Who can trust this current military and USDP back-up government with 100%???? That’s the thing..That’s why NLD is trying to make sure not to be cheated or not to be treated powerabusively as usual…..We understand fully the menaing of ‘safe-guard’ which is supposed to be in the oath as usual like the other countries do, BUT how can we trust these people when we want to change it????
The thing is that one of the three main reasons of NLD’s entering by-election is to change their so-called one-sided constitution for the sake of our Burmese people, right? SOoooo, it is reallyamatter to clarify as we cannot trust these people in the power…..To be trusted, you got to show yourself to be trustworthy…
zaw naing on April 25, 2012 at 3:00 am
ကျနော် အမြင် တင်ပြချင်တယ်။ NLD က ပြင်ချင်တာ ကို ပြဿနာတရပ် လုပ် ဆွေးနွေးကြတဲ့ ကိစ္စ အင်တာနက် စာမျက်နှာ များစွာမှာ တွေ့ရတယ်။ စာသားကို ပြင်ပေးနိုင်တဲ့ USDP အများစု လွှမ်းမိုးတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် က ” ဘာကြောင့် မပြင်ပေးနိုင်ပါ” ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေ အချက် အလက်တွေ အပေါ် အင်တာနက် ဝေဖန်ရေးသမားတွေ ဝေဖန်တာ မတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီအခြေခံ ဥပဒေကြီး ဟာ ဘုရားဟောဒေသနာတော် ကြီးလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကြီး ဖြစ်တာတောင် ဝေဖန်ခွင့်ရဦးမယ်။ အခြေခံ ဥပဒေကြီး ကို တီထွင်ရေးဆွဲခဲ့သူတွေ ရှိဦးမှာပါ။ ပြည်သူထမင်း၀၀မစားရ- လက်ရှိ အခြေအနေထက် ပိုဆိုးသွားမှာ ကို အနာဂတံ ဥာဏ်တော်ကြီးတွေနဲ့ တင်ကြို မြင်နေရလို့ ” ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ဖို့ ” ကနေ နဲနဲ လေးမှ မလျှော့ပေးတာလား။ ကျမ်းကျိန် စာ ပိုဒ် က ပြည်သူတွေ ရေးဆွဲခဲ့တာ ဆိုယင်—ခု စာပိုဒ်ပြင်ရေး—-ပြည်သူတွေကို တာဝန် ပြန်ပေးလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်။ လူထုထဲချပေးလိုက်ယင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အဖြေထွက်လာမယ်လို့ ဆိုင်ရာကိုအကြံပေးချင်တယ်ဗျာ။